I. Rito pleating စက်၏ကောင်းကျိုးနှင့်လက္ခဏာများ:
၃။ နှစ်ဆဖြစ်စေ၊ သုံးခေါက်ဖြစ်စေ၊ အတိမ်အနက်နှင့်အကွာအဝေးကိုညှိနိုင်သည်။
၄။ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အချက်များ၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်လက်စွဲစာအုပ်တွက်ချက်မှုမရှိပဲစက်လည်ပတ်နေသည့်သာမန်အလုပ်သမားများသည်သာမာန်လှပသောခြံတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ပြီးထုတ်ကုန်များ၏အထွက်နှုန်းကိုများစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်။
5. လည်ပတ်မှုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသော၎င်းကိုအလိုအလျောက်ခြံ လုပ်၍ အပ်ချုပ်စက်သို့အလိုအလျောက်ပို့ရန်ခြယ်လှယ်သူအားမွေးစားပါ။
၇။ servo motor နှင့်တိကျသောဝက်အူထိန်းချုပ်ခြင်း၊
၂ ။ အသုံးပြုရန်အတွက်ညွှန်ကြားချက်များ
1. အလုပ်နိယာမ: ဒီစက်ကိုအလိုအလျောက်ကုလားကာ pleat စက်ဖြစ်ပါသည်, input ကိုအထည်အရှည်, ကုလားကာအရှည်အလိုအလျောက် pleat အကွာအဝေး, pleat အရေအတွက်, စက်မှုနှိပ် pleat ခြယ်လှယ်နို့တိုက်ကျွေးရေး, အကြိမ်ပေါင်းများစွာ manual pleats ၏အိုမင်းသည်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။
2. လျှောက်လွှာ: အထည်ကုလားကာအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုး pleated ကုလားကာခေါင်း။
၃။ အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - နှာခေါင်း၊
pleated အကွာ: 10-28cm Pleated အမြင့်: 2-4.5cm ပါဝါ parameters တွေကို: 220V / 1.8KW
လိုအပ်သောဖိအား ၃-၆kg / cm²စက်အရွယ်အစား - ၁၈၀၀ * ၁၅၀၀ * ၁၅၀၀ မီလီမီတာစက်အလေးချိန် - ၄၂၀ ကီလိုဂရမ်
pleat အရေအတွက်နှင့် pleat အကွာအဝေးကိုအလိုအလျှောက်တွက်ချက်ရန် 4. Input အထည်အရှည်နှင့်ကုလားကာအရှည်;
6. လက်ကိုင်အထည်, အလိုအလျောက် pleating စက်။
(Parameter ဆက်တင်)နှစ်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
၂။ စက်၏ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများသို့ရေနံဆီတစ်စက် (သို့) နှစ်ခုထည့်ပါ။